Surface Scrape Heat umzimba Factory | I-China Surface Scrape Heat Exchanger Abakhiqizi nabahlinzeki
Njengamanje, inkampani inabachwepheshe nabasebenzi abangaphezu kuka-50, ngaphezulu kuka-2000 m2 womkhakha wokusebenzela, futhi ithuthukise uchungechunge lwemishini yokupakisha ephezulu ye- "SP", njenge-Auger filler, i-Powder ingagcwalisa umshini, i-Powder ixutshwe umshini, i-VFFS njll. Yonke imishini isidlulile isitifiketi se-CE, futhi ihlangabezana nezidingo zesitifiketi se-GMP.
Ubuso Obusikiwe bokushisa kwe-Exchan ...
Okuzenzakalelayo Powder Can Fillin ...
SPAS-100 okuzenzakalelayo Can Seam ...
I-Surface Heat Exchanger-SPA
Iyunithi yethu ebandayo (Iyunithi) ilingiswa ngemuva kohlobo lweVotator lwensimbi eshisa ukushisa ebusweni futhi ihlanganisa izici ezikhethekile zedizayini yaseYurophu ukusizakala ngemihlaba emibili. Yabelana ngezinto eziningi ezincane ezishintshanayo. Ama-Mechanical seal kanye nama-scraper blades ayizingxenye eziguquguqukayo ezijwayelekile. Isilinda sokudlulisa ukushisa siqukethe ipayipi ekwakhiweni kwepayipi nepayipi langaphakathi lomkhiqizo nepayipi langaphandle lokupholisa ifriji. Ishubhu elingaphakathi lenzelwe ukusebenza kwenqubo yokucindezela okukhulu kakhulu. Ijakhethi yenzelwe ukupholisa okuqondile okuhwamuka ngqo kweFreon noma i-ammonia.
I-Surface Eshubile Yokushisa Okushisayo-i-SPX
Uchungechunge lwe-SPX olusikiwe lokushisa olungaphezulu lufanelwe ikakhulukazi ukufudumeza okuqhubekayo nokupholisa kwemikhiqizo yokudla okubonakalayo, okunamathelayo, okuzwela ukushisa kanye nokudla. Ingasebenza ngemikhiqizo ehlukahlukene yemidiya. Isetshenziselwa izinqubo eziqhubekayo njengokushisa, ukupholisa i-aseptic, ukupholisa i-cryogenic, i-crystallization, ukubulala amagciwane, i-pasteurization kanye ne-gelation.
I-Surface Esikiwe Yokushisa Okushisa-i-SPT
Ftherm® I-SPT esetshenzisiwe yokushiswa kobuso obushisayo zingamiselela kahle iTrlotherm's Scraped Surface Heat Exchanger, kepha, Ftherm Ama-®SPT SSHEs abiza ikota kuphela yentengo yabo.
Ukudla okuningi okulungiselelwe neminye imikhiqizo ayikwazi ukuthola ukudluliswa okuhle kakhulu kokushisa ngenxa yokungaguquguquki kwakho. Isibonelo, ukudla okuqukethe imikhiqizo emikhulu, enamathelayo, enamathelayo noma ngekristalline kungavimba noma kuvimbe ngokushesha izingxenye ezithile zomshini wokushisa. Lesi shintshisi sokushisa esisheshayo sithatha izici zemishini yaseDashi futhi sisebenzisa imiklamo ekhethekile engashisa noma ipholise leyo mikhiqizo ethinta umphumela wokudlulisa ukushisa. Lapho umkhiqizo ufakwa kwisilinda sempahla ngepompo, isibambi sokususa kanye nedivayisi yokuphrinta kuqinisekisa ukusatshalaliswa kwamazinga okushisa, ngenkathi kuhlanganiswa umkhiqizo ngokuqhubekayo nangobumnene, okokusebenza kususelwa kude nendawo yokushintshanisa ukushisa.
I-Surface Esikiwe Yokushisa Okushisa-i-SPK
Isishintshisi sokushisa esisheshayo esivundlile esingasetshenziselwa ukushisa noma imikhiqizo epholile nge-viscosity ye-1000 kuye ku-50000cP ilungele ikakhulukazi imikhiqizo ephakathi kwe-viscosity. Idizayini yayo evundlile iyayivumela ukuthi ifakwe ngendlela engabizi kakhulu. Kulula futhi ukulungisa ngoba zonke izingxenye zingagcinwa phansi.
IMargarine Pilot Plant Model SPX-LAB (Isikali seLab)
Isitshalo somshayeli we-margarine / esifushanisa siqukethe ithangi elincane le-emulsification, uhlelo lwe-pasteurizer, i-Scraped Surface Heat Exchanger, isistimu yokupholisa evaporative ekhukhulekile, umshini wesisebenzi sephini, umshini wepakethe, i-PLC kanye nohlelo lokulawula i-HMI nekhabethe likagesi. I-Freon compressor yokuzikhethela iyatholakala. Yonke into yakhelwe futhi yakhiwa ngaphakathi endlini ukulingisa imishini yethu yokukhiqiza ephelele. Zonke izingxenye ezibucayi zingumkhiqizo ongenisiwe, kufaka phakathi i-Siemens, iSchneider neParkers, njll. Uhlelo lungasebenzisa i-ammonia noma iFreon ukubanda.